သင့်တော်မဲ့ Career ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ? - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » Knowledge » သင့်တော်မဲ့ Career ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ?
by Min Thuta on March 17, 2020 -0Comments
လက်ရှိအချိန်မှာပိုပြီး ကူးစက်မှုနှုန်းများလာတဲ့ Covid 19 ကိုကျနော်တို့တွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုကာကွယ်မှုတွေ လုပ်နိုင်မလဲ? ကျနော်တို့အနေနဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မိသား...
by Min Thuta on March 23, 2020 -0Comments
လက်ရှိအချိန်မှာပိုပြီး ကူးစက်မှုနှုန်းများလာတဲ့ Covid 19 ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာမရောက်ရှိသေးပေမဲ့လည်း ကုသခြင်းထက် ကာကွယ်ခြင်းကထိရောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း အဆိုပါ...
by Min Thuta on March 10, 2020 -0Comments
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ လက်ဆေးခြင်း ဆိုတဲ့လုပ်ဆောင်ခြင်းကို တစ်ဘဝလုံးလုပ်ဆောင်လာခဲ့ပေမယ့် နည်းလမ်းတကျဆေးဖြစ်ရဲ့လား ? ရောဂါပိုးမွှားတွေကို ဟန့်တားအောင် စနစ်တကျဆေး...
All times are GMT 6.5. The time now is 5:46 pm.